‘जातजातिबारे पुरातत्व र वंशाणुविज्ञान अध्ययन गर्दै छु’ « Tuwachung.com
दीपेन्द्र राई	२०७७ मंसिर २०, १९:०७
भोगीराज चाम्लिङ युवापुस्ताका अध्ययनशील व्यक्तिमा गनिन्छन् । चाम्लिङ पछिल्लो समय इतिहास, संस्कृति र पुरातत्व अध्ययनमा रमाइरहेका छन् । उनी नेपाल, भारत र चीनका जातजातिबारे पुरातत्व र वंशाणुविज्ञान (जेनेटिक साइन्स) सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक रचना बढी अध्ययन गर्दै छन् । इसमता अनलाइन म्यागेजिनका सम्पादकको भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आएका मुन्दुम अध्येता चाम्लिङसँग तृुवाचुङ डटकमले गरेको पुस्तक संवाद :
हिजोआज कुन किताब अध्ययन गरिरहनुभएको छ ?
ठ्याक्कै अहिले नै त म ‘कोर्सबुक’ पाठ्यपुस्तक पो पढ्दै छु । लेखक उपेन्द्र सुब्बाले ‘बूढो हुँदै गइयो कि क्या हो, इतिहासमा पो रुचि बढ्न थालेको छ’ भन्नुहुन्थ्यो रे भन्ने सुनेको थिएँ । त्यस्तै भएर हो कि पछिल्लो चरणमा इतिहास, संस्कृति र पुरातत्वमा मेरो रुचि देखेर संगीतश्रोताको ‘सकारात्मक उक्साहट’ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृति विभागमा भर्ना भएको थिएँ । अहिले स्नातकोत्तर दोस्रो वर्षको परीक्षा आउन १० दिनजति बाँकी छ । त्यो पो पार लगाउनुपर्यो भनेर लाग्दै छु ।
जहाँसम्म पाठ्यपुस्तकबाहेक हालसालै पढ्दै गरेको किताबको कुरा छ, म अहिले सिङ्गै किताबभन्दा पनि नेपाल, भारत र चीनका जातजातिबारे पुरातत्व र वंशाणु विज्ञान (जेनेटिक साइन्स) सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक रचना बढी अध्ययन गर्दै छु । किताबमा चाहिँ डीडी कोसाम्बीको ‘मिथ एन्ड रियालिटी’, रोमिला थापरको ‘वंश से राज्य तक’, डीएन झाको ‘हिदु अस्मिता : एक पुनर्चिन्तन’ र आरसी मजुमदारले सम्पादन गरेको ‘द वैदिक एज्’ पढ्दै छु । सबै अधकल्चो मात्र भएका छन् ।
एउटा किताब अध्ययन गर्न कति समय लगाउनुहुन्छ ?
त्यो त समय परिस्थिति, रुचि आदिले निर्धारण गर्ने रहेछ । कतिपय किताब एकै बसाइमा सकिन्छ, कतिपय हप्ता, दस दिनमा । कतिपय पढ्न सुरु गरेको वर्ष दिनमा पनि सकेको छुइनँ ।
किन्न असम्भव भएपछि मागेर अध्ययन गर्नुभएको किताब कति होलान् ?
थुप्रै छन् । दुई/तीन कारणले किताब किन्न असम्भव हुने गरेको छ मलाई । एक, पुराना किताब जो बजारमा पाइँदैनन् । दुई, विदेशतिर प्रकाशित पुस्तक । तीन, पैसा अभाव भएको अवस्था र महँगा किताब । यस्ता किताब मागेर पढ्ने गरेको छु । केही समयअघि प्रा. दिनेशराज पन्तसँग पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशबारे अनुसन्धानात्मक किताब, योगी नरहरिनाथको इतिहास प्रकाश, धनवज्र वज्राचार्यको मल्ल र शाहकालीन अभिलेखसम्बन्धी किताब मागेरै पढें । मागेर पढेका कतिपय किताब त मैले पचाइदिएको पनि छु । त्योचाहिँ अहिले गोप्य नै राखौं । मेरा पनि पचाइदिएका छन्, त्यो पनि अहिलेलाई गोप्य नै राखौं ।
बजारमा आएका नयाँ–नयाँ किताब खोजी कसरी गर्नुहुन्छ ?
पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समीक्षा पढेर, पुस्तक पसल चहारेर र साथीहरूको सफारिसमा नयाँ किताबह छान्ने गरेको छु ।
मासिक आम्दानीको कति प्रतिशत किताबमा खर्चिनुहुन्छ ?
खोइ ठ्याक्कै हिसाब–किताब हुँदैन । तर, एउटा कुराचाहिँ के भने मासिक आम्दानी नहुने बेला पो किताब धेरै किनेको छु । ‘किताब किन्नुपर्ने, पैसा छैन सापटी पाऊँ न’ भनेर माग्न सजिलो हुँदोरहेछ साथीहरूलाई । मासिक आम्दानी हुँदा त घरव्यवहार टार्दै पो हैरान । यसो मिलाएर अति आवश्यक र मन परेका किताब जसरी जति परे पनि किन्ने गरेको छु ।
किताब अध्ययन गर्न पाउनु भएन भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ?
यो पनि समय परिस्थितिअनुसार फरक हुने रहेछ । एक्लै हुँदा अथवा थकान हुँदाचाहिँ हिजोआज सामसुङ ट्याबमा क्यान्डी क्रस पो खेल्दोरहेछु थाहै नपार्इ । तर, किन्डल एप्स डाउनलोड गरेको छु, एक लेभल पार गरेर पीडीएफ फर्म्याटका किताब हेर्न थाल्छु । साथीहरूसँग हुँदा त चिया खायो, घाम ताप्यो, गफ उडायो, यस्तै–यस्तै त हुन्छ ।
किताब प्रकाशन गर्ने बाढी नै चलेको छ । तीमध्ये कति पठनीय होलान् ?
प्रकाशनको लहर आउनु राम्रो भएको छ । अब गुणस्तरीयतामा लेखक र प्रकाशकको वबस्तारै ध्यान जान थालेको देखिँदै छ । यसमा मातृभाषाका प्रकाशनहमा पनि उत्साहजनक स्थिति देखापर्दै छ ।
अध्ययनका लागि केका आधारमा किताब छान्नुहुन्छ ?
रुचिको विषयले किताब छान्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
अहिलेसम्म कति किताब अध्ययन गरिसक्नुभयो होला ?
खोइ होउ, यसै भन्न सकिएन । कोठामा भएका पनि सबै किताब पढिएका छैनन्, कोठामा नहुँदैमा नपढिएका पनि छैनन् ।
तीमध्ये दोहोर्‍याएर अध्ययन गर्ने किताबको नाम ?
उहिले त साहित्यका किताब खुबै दोहोर्‍याएर पढियो । अहिले अनुसन्धानमा आधारित पुस्तक र जर्नलमा प्रकाशित रचना दोहोर्‍याएर पढ्ने गरेको छु । हालसालै चाहिँ जेनेटिक साइन्ससम्बन्धी जर्नलमा प्रकाशित रचना दोहोर्‍याएर पढ्दै छु । यी नयाँ विषय भएकाले एकपटकमा बुझ्न नसकेर दोहोर्‍याउँछु, अर्को रोचक पनि लाग्ने गरेको छ, त्यसकारण दोहोर्‍याउँछु । किताब नै चाहिँ पछिल्लोपटक दोहोर्‍याएर पढेको कम छ ।
अध्ययन त सबैले गर्नुपर्छ तर पत्रकारले पढ्नैपर्ने किताबको नाम बताइदिनुहोस् न ।
नढाँटी भन्ने हो भने म पत्रकारले पढ्नुपर्नेखालको भन्दा पनि समाजविज्ञानसँग सम्बन्धित किताबको नाममात्र दिन सक्ने रहेछु । पत्रकारितासम्बन्धी किताब निकै कम पढेको रहेछु । एउटा पढ्नैपर्ने किताब चाहिँ एडवार्ड एस हर्मन र नोम चोम्स्कीको ‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट : द पोलिटिकल इकोनमी अफ् मास मिडिया’ हो कि जस्तो लाग्छ ।